Na nkenke kọwaa ntụnyere dị n ’etiti PVC na ụlọ rọba? - Akụkọ-Topflor China nwere oke
Echiche:50 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-04-13 Mmalite: Saịtị
Ihe mejupụtara na imepụta ihe dị iche: E kewara ala roba n'ime homogeneous na heterogeneous. Floorlọ PVC dị ka ụlọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ebe ọha na eze, nnukwu ụlọ ahịa, azụmahịa, na ebe ndị ọzọ. "PVC ala" na-ezo aka n'ala nke ejiri ihe polyvinyl chloride mee. Akụkụ bụ isi nke onye na-emepụta ala plastik bụ ihe polyvinyl chloride. Enwere ike ịkwanye ala PVC n'ime ụdị abụọ, otu bụ homogeneous na transperent, ya bụ, ihe eji eme ihe site na ala ruo n'elu bụ otu. Nkume plastik ala bụ ụdị ihe ịchọ mma nke ala dị iche iche mepụtara site na nyocha dị elu, nyocha ọgbara ọhụrụ na mmepe. Ọ na-eji okike mabul okike mepụta ntọala siri ike nke nwere ogo dị elu yana akwa netwọkụ nwere eriri dị elu, ma kpuchie elu PVC polymer. A na-edozi n'ígwé site n'ọtụtụ narị usoro. Ogdị roba roba dị na ya sitere na rọba eke ma ọ bụ roba sịntetik, nke nwere otu-akwa ma ọ bụ ọtụtụ ihe eji eme otu ụdị na agba. Hererogeneous roba flooring dabeere eke roba ma ọ bụ sịntetik roba.
Agba dị iche: Agba roba n'ala bụ ihe siri ike, n'ihi na roba nwere ike absorption agba, nke bụ dịtụ otu kacha acha roba n'ala; PVClọ PVC na agba dị ọtụtụ, nchikota ọ bụla, nwere ike inye ndị na-emepụta ihe nhọrọ ndị ọzọ.
Ihe isi ike nke nrụnye dị iche na ogo dị iche iche: ala PVC bụ ọkụ na ederede, nke dị mma na ngwa ngwa ịwụnye na iji; ala rọba ahụ dị arọ, ọ na-arụsikwu ọrụ ike ịwụnye otu. Ọzọkwa, usoro ntinye nke ala roba nwere ike ịchọ ka ụmụ akwụkwọ na-agbasi mbọ ike. Ọ bụrụ na usoro izi ihe ezighi ezi, afụ ga-apụta, ihe achọrọ maka ntọala nke onwe ya ga-abụ nke zuru oke, ma ọ bụghị na a ga-ekwubi okwu ntụpọ nke isi ahụ.
Ọchịchọ ahịa na adịghị ike mgbagha: N’ihi oke ọnụ ahịa nke roba, a na-eji ya na ụfọdụ ebe dị elu, dịka ụlọ ọgwụ, ụzọ ụgbọ oloko dị elu, ọdụ ụgbọ ike, akwa ụgbọ elu ụgbọ elu, ọdụ na ebe ndị ọzọ. Ejiri mee ihe na warara; na ịkwanyere flooring ọtụtụ-eji ruru ya elu na-eri, na ahịa nwere bụ nnukwu. Ọzọkwa eyi flooring roba, nke siri ike, ọ dabara maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọdụ ụgbọ elu, ọdụ na saịtị ndị ọzọ dị elu, yana ụgbọ elu, ụgbọ oloko, ụzọ ụgbọ oloko, ụgbọ ala, ụgbọ mmiri na ụgbọ ala ndị ọzọ.
2. Quality management chọrọ maka ịkwanyere flooring ngwaahịa
2.1. Ọnọdụ okpomọkụ nke ime ụlọ dị n'ime ụlọ mgbe etinyere gluu ga-adị ukwuu karịa 10 Celsius C, ma ọ bụghị nke a na-amachibido iwu. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa 10 Celsius C, a na-ekpebi oge ịgwọ nkụkọ gluu dịka ọnọdụ ọrụ ụlọ ọrụ a kapịrị ọnụ si dị.
2.2, ndị anamachọ ihe niile ga-etinyerịrị, ma n'otu oge ahụ gbasasịa nke ọma.
2.3, na ezi uche edo ọnwụ.
2.4. Oge ịgba ọsọ ahụ na-etolite nwayọ ma kwụrụ ọtọ, oghere ahụ enweghịkwa nsị.
2.5. Hichaa ngafe ma ọ bụ mpekere ndị ọzọ na tankị ịgbado ọkụ tupu ịgbado ọkụ.
Ugboro abụọ The ịgbado ọkụ akara bụ mụ na akara bụ ogologo.
Ugboro abụọ Mwepụ nke mbụ nke ngafe ịgbado ọkụ ga-echere ruo mgbe ọnọdụ okpomọkụ nke ihe nkedo ahụ dị ntakịrị obere tupu ịga n'ihu.
2.8. N'oge a na-etinye bọọdụ bọọdụ nke PVC, ụmụ akwụkwọ ga-enwe ike idobe ihe dị ọcha, mechiri emechi, ihe ngosi ihu igwe, ma jigide ụfọdụ ọnọdụ okpomọkụ na ụlọ ọrụ ahụ opekata mpe 48 awa tupu mgbe ụmụ akwụkwọ ahụ gachara.
Ugboro abụọ Mmiri iru mmiri nke gburugburu ụlọ agaghị agafe 2.9%. Ọnọdụ teknụzụ maka nchekwa nke ihe bụ otu.
Ugboro abụọ Bugharịa ma gbadaa ala PVC ma tinye aha mmado na ya. Gbalisie ike idobe agba, olu, na ogbe batrị nke ọma.
Ugboro abụọ Ọ bụrụ na ejiri ọtụtụ ihe dị iche iche nke otu ngwaahịa agba ahụ, ma a ga-ejikwa otu ụdị ogbe mmepụta, a ga-atọgbọ ha n'usoro nọmba mpịakọta. Jiri otutu ihe di iche iche, ma lezie anya ka itinye ihe di iche iche di iche iche maka mmepe na latọ.
Ugboro abụọ A ga-ahazi ihe ndị ahụ na ntuziaka ndị ọzọ iji zere aberrations nke chromatic na nsị.